VOICES FOR MOMOS
VOICES FOR MOMOS isacampaign launched in response to the Myanmar elephant poaching and skinning crisis. On average we are losing one wild elephant every week. If this doesn't stop Myanmar will lose its wild elephants forever. VOICES FOR MOMOS calls on individuals and organisations to use their voice to speak up for elephants before these noble giants are silenced forever.
Petitioning ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် , ဦးထင်ကျော် , ဦးအုန်းဝင်း , ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ၊, ဦးအုန်းမောင်
မြန်မာပြည်မှာ ဆင်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရောင်းဝယ်နေတာတွေကို တားဆီးကြပါစို့
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ပတ်လျှင် တောဆင်ရိုင်း တစ်ကောင်နှုန်း သတ်ဖြတ်ခံနေရပါတယ်။ ဆင်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဈေးကွက်တွေမှာ ရောင်းဝယ်နေကြပါတယ်။ မဝယ်ပါနဲ့! မသုံးပါနဲ့! မရောင်းပါနဲ့! ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ ဟာ မိုမိုတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက် ဆင်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ ရောင်းဝယ်နေတဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး က ဈေးကွက်တွေ ပိတ်သိမ်းရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ ကတိပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပါတယ်။ At least one wild elephant is killed every week in Myanmar. Elephant products are sold in our markets. Don't buy! Don't use! Don't sell! We, the undersigned, pledge to keep our momos safe by ending the sale of elephant products nationwide.